सामाजिक सञ्जालमा 'तमिल सुपरस्टार विजयको मृत्यु' ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
सामाजिक सञ्जालमा ‘तमिल सुपरस्टार विजयको मृत्यु’ !
सामाजिक सञ्जालमा ‘तमिल सुपरस्टार विजयको मृत्यु’माजिक संजालमा कतिखेर के र को भाइरल बन्छ थाहा हुन्न। सत्य कुरा भाइरल हुँदा त राम्रै हो तर गलत खबर फैलिदा भने सो खबरसँग सम्बन्धितले हैरानी बेहोर्छन्। यस्तै एउटा हल्ला सोमबार फैलियो। र यो हल्लाको सिकार भए तमिल सुपरस्टार विजय
साट्वीटरमा उनी मरेको भन्दै ह्याट्याग रिप एक्टर विजयु ट्वीटहरू भए। सुरूमा यसबाट धेरै झुक्किए तर पछि थाहा भयो खबर त झुट रहेछ। त्यसपछि विजयका फ्यानहरू आक्रोषित भए र सोप्रति उनीहरूले आफ्नो असन्टुष्टि र रोष प्रकट गरे। उनहरूले यसको खुलेर ट्वीटरमा प्रतिकार गरे। यो खबर खासमा विजयलाई मननपराउनेहरूले चलाएका रहेछन्।
यस हल्लाबाट दुःखी विजयका एक फ्यानहरूले विजय सहि र फिट रहेको ट्वीट गरेका छन्। सो ह्यासट्याग करिब ५० हजार बढि पटक ट्वीट भएको छ। यसबाट निराश भएकाहरूले सो ह्यासट्याग हटाउनुपर्ने मागसमेत गरे। यस हल्लाले ट्वीटर केहि समय गर्माए पनि हाल सो शान्त भएको छ।
समाचारसामाजिक सञ्जालमा 'तमिल सुपरस्टार विजयको मृत्यु' !
नुवाकोटको सरकारी कार्यालयमा बम वि’स्फोट, रौतहटमा आगजनी